ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေကြိုတင်မဲဆန္ဒထည့်သွင်းနိုင်နေရာကို TDCC ရုံးတွင်ပြုလုပ်ကျင်းပသွားနိုင်ဖွယ်ရှိ – Myanmar Live
သတင်းများ / မြန်မာ
ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေကြိုတင်မဲဆန္ဒထည့်သွင်းနိုင်နေရာကို TDCC ရုံးတွင်ပြုလုပ်ကျင်းပသွားနိုင်ဖွယ်ရှိ
September 2, 2020 September 2, 2020 - by iampmy
ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေ ကြိုတင်မဲဆန္ဒထည့်သွင်းနိုင်နေရာကို စမွတ်ဆာခွန်ခရိုင်က သာမာန်မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးရုံး (TDCC) တွင်ပြုလုပ်ကျင်းပသွားနိုင်ဖွယ်ရှိ။
သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံရုံးမှ သံတမန်များနှင့် စမွန်ဆာခွန်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးတို့ ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြိုတင်မဲဆန္ဒပေးနိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကြိုတင်မဲဆန္ဒထည့်သွင်းရန်နေရာကိုတော့ သာမာန်မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံး(TDCC) တွင် ပြုလုပ်သွားရန်အလားအလာရှိကြောင်း Sakhon online သတင်းမှရေးသားဖေါ်ပြချက်အရသိရသည်။
လက်ရှိစာရင်းအရ ကြိုတင်မဲဆန္ဒပေးရန်ဖောင်တင်ထားသည့် ထိုင်းရောက်မြန်မာလူဦးရေစာရင်းမှာ ၃၀၀၀၀ ကျော်ခန့်ရှိပြီး မဲဆန္ဒရှင်များတွင်မဲပေးရန်လိုအပ်သည့် အရေအချင်းများရှိမမရှိကို မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ပြန်လည်သုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာအာဏာပိုင်များက ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကြိုတင်မဲဆန္ဒမေးမည့်နေ့ကို ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၁၅ ရက်နေ့ကြား သတ်မှတ်ပေးထားတာကြောင့် တစ်ချိန်တည်းမှာ လူဦးရေအမြောက်အများလက်ခံနိုင်တဲ့ စမွတ်ဆာခွန်ခရိုင်၊ ထာ့ကျင်မြို့နယ် ထလေထိုင်းဈေးနားက သာမာန်မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံး(TDCC) တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားရန် ရွေးချယ်ထားကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ပြည်လုံးကျွတ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ ရွေးကောက် ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး မဲဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခွင့်ရှိသူလူဦးရေ ပြည်တွင်း ၃၇ သန်းနှင့် ပြည်ပ ၄ သန်းဦးခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဘာသာပြန် – ဝင်းထက်
ကိုးကား : Sakhon online, Manager Online
TaggedMyanmarmyanmar liveMyanmar live newsMyanmar newsMyanmarliveMyanmarlivenewsSamutsakorn
တစ်နေ့တည်းမှာရောဂါကူးစက်သူ ၁၂၀ ဦးကျော်လွန်ခဲ့တဲ့နောက် ရန်ကုန်မြို့အချို့ရပ်ကွက်များမှာလော့ခ်ဒေါင်းချ
မြန်မာလုပ်သားများကို တရားမဝင်တင်ဆောင်လာသော ပစ်ကပ်ကားမှ တာ့ခ်ခရိုင် လ.ဝ.က. ကားကို ဝင်တိုက် တစ်စင်းတိမ်းမှောက် ၂ ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်
Previous Article ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလ ၇-၁၃ ရက်ထိ
Next Article မြန်မာလုပ်သားများကို တရားမဝင်တင်ဆောင်လာသော ပစ်ကပ်ကားမှ တာ့ခ်ခရိုင် လ.ဝ.က. ကားကို ဝင်တိုက် တစ်စင်းတိမ်းမှောက် ၂ ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်
View all posts by iampmy →